Seenaa GabaabduuAbdallaa Aammad Teeysoo (1946 -2021 | OROMOTV
Abdallaa Aammad Teeysoo
Adooleessa 04, 2021
Fedhii daangaa bal’ifachuu tan Minilik bara 1872 keeysa ummata Walloo-rratti duuluun jalqabe hawaasni dura dhaabbate marti gatamaa fii gadadoof saaxilame. Haala kanaaf ummanni Arsii harkaa fii harma itti dhabe. Hawaasni Baha Oromiyaa qabeenya malees eenyummaa saa itti dhabee, Qottuu ja’ame. San malees, nafxanyaan irratti muudamtee yaroo barbaaddetti miraaza isaarraa kan kaafattu tahe.
Gochi nafxanyoonni lafa ykn ooyruu jaalatan Oromoo fedhan irraa kaafachuu bulchiinsa Xaaliyaan kan bara 1936 fii 1941 jidduu tureen ummata Oromoo irraa dhaabbatullee, akka Ingiliz Hayle Sillaasee baqarraa deebiseen daran itti hammaate. Gocha gabrummaan ummata Oromoo mudde kana, yaroo sanitti, warra fudhachuun liqimfamuuf diddee keeysaa tokko, Aammee Teeysoo Wadaayi. Aammeen, Godinaa Baha Oromiyaa, Aanaa Gaara Mul’ataa, Araddaa Raada Yaayyaa, Ganda Horee ja’amu, kan magaalaa Gurawaa irraa amna miila qeeyroo tiin cinaa sa’aa fagaatu keeysa, miraaza akhaakhoo fii abaaboo-rraa dhaalarra nama qubatee jiraatu ture. Duuba, nafxanyoota lola Calanqoo kan Amajjii 06, bara 1887 booda, Minilik Manzi-rraa kumootaan fidee hawaasa Oromoo keessa malkanyummaan qubachiiseen, akkuma Oromoota biraatti, Aammadiis handhuraa isaarra buqqaafamuun itti xiyyeeffatamte.
Xiyyeeffannaa tanaan, Aammad, nafxanyaan doorsifamu bira taree, dagutti eegamee, cinaacha keeysa dirame. Gaafa kaan, haaluma saniif nafxanyaa ooyruu isaa seene mancaan khitifee, halkan dukkana, Haadha Warraa, Rahimaa Wadaayii fii ilmaan isaa warra yaroo sanitti dhalatan Usmee, Faxxumee fii Maammad fudhatee, obboleeytii isaa, Kadijaa Teeysoo, tan hireen heerumaa Aanaa Hara Maayaa, naannoo Shariif Khaalid, Ganda Rukheeytii qubachiise biratti baqate.
Nafxanyoonni Aammee dhabnaan firoota isaa tii fii kan Haadha Warraa araraasutti seenan. Obboleeytii Rahimaa Wadaay cafaqqii keeysa, miila, tafarra hamma jilbaatti irratti ajjeesan. Araraafani sababaa isaa tiin firootarra gayu, odoo hin jaalanne, Aammad, qe’etti deebi’ee heeraan fuula keeysa wal laaluu murteeyfachiise. Akkasiin, maatii waliin baqate malees ilma isaa, Abdalla, kan toora bara 1946 keeysa Rukheeytitti dhalate, qabatee qe’etti deebi’e. San booda baannata (himata) awaayoo tanaa fii tan diddaa miraazaa gadhiisuu dhabaa tiif Biyyoo Adareetti daddeebi’uun hujii isaa taate.
Nafxanyoonni bakka lafa ykn ooyruu bareedduu arkanitti waajjira muutummaa Amaaraa dhaqanii baannata “dachiin tuni naan maltii,” qofaan Oromoota hedduu-rraa miraaza fudhachaa jiraatanillee, Aammad haala dandayamu hundaan kan dura dhaabbatu tahe. Dura dhaabbii tana keeysa, wanni Aammad akkaan rakkisaa dhufe afaan Amaaraa beekuu dhabuu-rraa kan ka’e muggutii godhuuf simaa-baloo dhaabbachuu dha.
Hamma nafxanyoonni lafa isaa tiif gororan jiranitti falmiin mirga qabeenya isaa tiif godhu waan adda hin cinneef, Aammeen, ilma isaa Abdalla, afaan Amaaraa barsiifachuu murteeyfate. Akkasiin, akka afaanicha baree isa gargaaruuf, Abdalla, beeyladaa tiiysu jalaa fuudhee, mana barnoota Amaaraa (akka gaafas ja’amutti) kan magaalaa Gurawaa keeysa jiru naqe.
Abdalla, Ammad Teeysoo tii fii Rahiimaa Wadaayiif ilma afraffaa ti. Isa booda Kaddo-Siree, Nuuriya fii Jundii tu dhalate. Abdalla, abbaan obboleeyyaniin adda baasee, beeyladaa tiiysuu jalaa fuudhee, barnootatti bobbaasuu irraa haalaan gaammadee, qaraatitti cimee, barnoota yoos naannoo sanitti kennamaa ture kan hamma hulaa jahaa, sadarkaa ardadoota hunda caaluun xumuree, achumatti hujii mootummaaf tan ummata naannoo sanii-rraa gibira guuruu-rratti mindaawe.
Xiqqo booda, Gurawa keeysaa bahee, dalaguma fakkaattuu akkasii tiin, naannoo Ejersa Gooroo fii Kombolcha keeysa sossoohutti seene. San booda, toora walakkaa bara 1966, hujii san dhiisee, Dirree Dhawaatti gale. Achitti, Waajjira Dhabamsiisa Busee tiif odoo dalaguu, toora bara 1968 keeysa Waajjira Bulchiinsa Magaalaa Dirree Dhawaa tiif, hojjataa guuraa taaksii tahe. Akka xiqqo tureen, taaksii alaa guuruu-rraa guddatee, Itti Gaafatamaa galmee waajjira bulchiinsa magaalaa tahe. Sanirraan, Muummee Waajjira Miraazaa muudame.
Abdalla Aammad waajjira bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa keeysa jiraachuun hawaasa Oromoo kan naannoo sanii tiif bu’aa guddoo buuse. Akkuma beekkamutti, magaalota akka Biyyoo Kharaabaa tanneen capha lola Calanqoo dura naannoo Baaha Oromiyaa keessatti madiinaa daldalaa turan booda warri dhaabbatan (keeysaa huu gurguddoon) iddoo hawaasa Oromoo daran alagoonni itti baayyatani. Dirreen Dhawaa magaalota akkasii tiif fakkii dha.
Magaalaan Dirree Dhawaa, sababaa hadiida baaburaa kan Jabuutii fii Finfinnee jidduu diriirsuu keeysatii, akkuma Finfinneetti, Minilikiin bu’ureeyfamte. Sadaasa 05, bara 1896 akka bu’ureeysuu isii murteeyseen, maqaan Minilik magaalattiif moggaase Addiis Harar kan ja’u ture. Wanni moggaasa kana fide, karoorri afaa hadiida baaburaa kan Jabuutii kaasee hamma Finfinneetti diriirfamuu jalqaba akka Biyyoo Adaree keessaan dabru murtaawuu dha.
Duuba, hujiin hadiidicha diriirsuu akka naannoo Adareetti dhihaateen, isii keeysaan dabarsuuf qeeyra (tabba) isii dura jiru ol baasuun rakkoo tahee arkame. Haalli hadiida Adaree keeysa baasuu akka hin dandayamne hubatamee, ganda miila qeeyra isii jala jiruun marsuun dirqama tahuun itti himamnaan, Minilik, karoora haaraya murteeyse biratti, gandichaaf maqaa Addis Harar ja’amu moggaasuu beeysise.
Muddee 24, bara 1902 akka diriirfamni hadiidaa kan Jabuutii-rraa ka’e achi gayeen, qubsumni Qaraxaa (Gumruukaa) kan daldala Bahara Diimaa waliin gaggeeyfamuuf naannoo Jaldeeysa qarmaammeeyfate achitti godaansifame. Waxabajjii 07, bara 1917 yaroo karaan baaburaa eeybifamu, gandi duraan xiqqaa magaalomee, qubsuma lama kan cirracha laga Dachaatuu tiin adda qoodaman, kan gama tokkoon nafxanyootaa fii gama kaaniin hojjattoota baaburaa kan booda, Faransaayota, Griikoota, Armanootaa fii Araboota dhunfate hore. Duuba, yaroo tanatti, maqaan Mootichi magaalattiif mooggaase fudhatama dhabee kanummaan gandaa, Dirree Dhawaa, itti maxxane.
Dirreen Dhawaa tan haala olii tiin magaalooyte, bifuma saniin bal’achuu fii qubataan baayyachuu itti fufte. Gaafa Abdalla itti godaanu, Dirreen magaalaa alagootaa tahuu hubachuuf yaroo irraa hin fudhanne. Abdalla bulchiinsa magaalaatti akka mindaaween, keeysaa huu itti gaafatamummaa miraazaa akka muudameen, haala magaalatti jijjiiruuf marxifate. Nama Oromoo kan sababaa eenyummaa isaa tiif lafa dhoorkame hundaaf karaa saaqe. Warra eenyummaan isaanii hayyama mana jirreenyaa jaarrachuu fii daldalaa banachuu waakkachaa ture duraa gufuu buqqise. Haala namni Oromoo lafa babal’oo magaalatti itti qabaturratti iccitii waajjiraa lammiif raabse. Karaa aanjeeyse. Akkasiin ilmaan Oromoo magaalattii keeysa baayyinaan miraaza akka horan godhe. Haala isaa kanaan maqaa “Abdallaa Mazzagaajjaa” ja’u hore.
Gama biraa tiin, Abdalla nama xiqqeenyaan eenyummaa isaa hubatee, akkuma abbaa isaatti, sabaaf anaannata hore. Haala isaa kanaaf, kabiirri abbaa malees, Abagaaz Walda Goorgisi. Abagaaz, akka Hayle Sillaaseen Iyyaasuu Gurawatti hidhuu dhagayaniin, booharsuuf Oromoota Wallorraa naannoo sanitti godaanan irraa tokko. Abagaaz, lakkuma bubbuluun hawaasni naannoo sanii tii fii kan inni biraa dhufe obboleeyyan tahuu hubate. Hubannoota saniin hawaasa Oromoo naannoo sanii tiin wal seene. Akki san, gaafa Abdalla barnootaaf Gurawa dhufe, Aammee-rraa fudhatee, ilma godhatee, akka if bira jiraachisee barsiisu godhe. Abagaaz bira jiraachuun daadarkaa amnaa tan guyyuu magaalaa fii baadiyyaa isaanii jidduu daddeemuu hanqisuu malees, sammuu Abdallaa keeysatti hawaasa Oromoo guddaa uumee, sab-boonummaa isaa tiif rushii tahe.
Agarsiisa aadaa Oromoo kan Gurraandhala 28, bara 1976, magaalaa gudditti Oromiyaa, Finfinnetti, godhamuun lammii walitti fidee wal barsiise, warra milkeeysan keeysaa tokko Abdalla. Gaafana, Abdalla Jamaal Alii Abdii, Abdurahmaan Muummee Badhaasoo, Abulaziiaz Usmaa’ilii fii Aadam Sabrii waliin koree gargaarsa horii funaantu tahuun, baasii uffata aadaa, nafaqaa fii geejjibaa kan miseensoota hawwisoo tiif barbaachisu mara maddisiise.
Jalqaba bara 1976-a, gaafa Jaarraa Abbaa Gadaa, hidhaa amata shanii booda, harka qullaa qabsoo hidhannoo jalqabuuf Soomaalee ka’ee, amna miilaa tiin, Gobeelleen fullahe, warra achitti dhaqanii simatan keeysa kan duraa Abdalla. San boodaas, Abdalla, Oromoota biraa waliin maadhetti gurmaawuun, qabsoo hidhannoo qacalee deeggarsa horii, miyaa fii qunnamtii tiin kulkulutti seene.
Gaafa Dargiin aangoo qabatee jiraattoonni magaalaa qabaleen jaaraman, Abdalla, hawaasa Afata Iissaa, kan ganda jireenya isaa, barreeysummaan tajaajilutti seene. Toora dhuma bara 1977, waldaya qotee bulaa naannoo Erer, kan nafxanyoota Addiis Katamaa hidhannoo hiikkachiisan gurmeeysuu-rratti Abdallaa qooda guddaa gumaache.
Walakkaa bara 1978, Abdallaa Adda bilisummaa Oromoo gargaartaan baanatamee amataa fii waa, mana hidhaa Mabraat Haylitti hidhame. Yoos, warra waliin hojjattuu fii caasaa dhaabaa saaxiliin akkaan araraafame. Innaawaa tumiinsa keeysa qunceen faantaa irraa solloyxe.
Bara 1991, gaafa Dargiin injifatamee, miseensoonni ABO magaalota keeysa qubachuu fii biyyattii keeysa ifatti sossoohutti seenan, Dirree Dhawaa keeysatti waajjira banachuu fii hawaasa jaaruu-rratti gumaachi Abdallaa akkaan guddaa ture. Akka mootummaan ceehumsaa diigamteen ABO deeggartaniin warra dura hidhaa Wayyaanee mudataniif Abdalla angafa.
Abdalla bulchiinsa mootummaa Wayyaanee keeysatti yaroo hedduu hidhame. Hidhaa fiis, Dirree Dhawaa malees, Adaree fii Gurawa geeyfame. Yaroo takka iddoo itti hidhame maatiin akka hin beeyne godhamee, waajjira Fannoo Diimaa tiin barbaadamee baafame. Abdalla hidhaa hundatti tumiinsaa illaa namatti tahu mudame. Doorsisa ajjeechaa tiif halkan walakkaa hidhaa-rraa gadhiifame. Isa bira taramee Haati Warraa doorsifamte. Akkasumaa waliin Abdalla qabsoo saba isaatti duuyda galuu dide. Haala dandayu hundaan tin’ise. Sodaa malee, qabsaawota madaawan hedduu mana isaatti kan wal’aanu tahe. Isaa akkasitti jiru, jalqaba bara 2004-ii, biyyarra Ameerkaa fidame.
Eega Ameerikaa dhufees, Abdalla, kani umriin if hin daangeeysine, wal’aansoo lammiin ala jirtu gootu hunda-rraa qooda fudhachutti seene. Walgayii Oromoo tan naannoo inni jirutti godhamtu mara-rraa qooda fudhate. Gumaacha horii malees eeybaa fii dhaadannoon teeysoolee kan mirqaansu tahe. Tana keeysa araraafama manni hidhaa mudee fii daadarkaa umriin itti fiddeen haalaan waan miidhameef, biyya isaatti awwaalamuu filate. Akkasiin, Waxabajjii 14, bara 2021, biyyaatti deebi’ee, bilisummaa akkaan jaalatuu fii saba isaa tiif hawwu odoo hin arkin, Waxabajjii 30, 2021, aakhiramee, akkuma fedhii isaatti, magaalaa Dirree Dhawaatti, qabrii haadha isaa madditti awwaalame.
Abdalla, akkuma abbaatti, gameeysa luuynummaan masaanuu, murataa, sab-boonummaan keeysaa finiintu, hayyuu fii arjaa namaa ti. Nama akkuma saba isaatti amantii isaa tiis jabeeysu. Kan hujii jiruu malees tan aakhiraa tiif hojjachuu sujuunni adda-rraa ifu ibsu. Abbaa ilmaan kudhanii tii fii akhaakhoo sodomii olii ti.
Rabbiin isaaf jannata, maatii fii firaaf jabina haa kennu!